Fewbọchị ole na ole gara aga ndị mmadụ jụrụ m, kedu ka m ga-esi mata onye weghachitere m? Mgbe folks jiri retweet atụmatụ n'ime Twitter, ọ bụ ezigbo mfe. Banye na Twitter nwere ike pịa Retweets na igodo aka nri. Kọlụm nke atọ bụ Tweets gị, Retweeted ma na-enye gị ndepụta nke Tweets gị niile ndị e degharịrị na ndị mere ya.
Enwekwara API kpọọ iji jide data retweet maka tweet nyere. Retweeting bụ ọrụ kwesịrị nsuso… ọ bụrụ na mmadụ na-akwalite ọdịnaya gị, ị nwere onye na-akwado gị ma ọ bụ akara gị. Nke ahụ bụ onye ọ nwere ike ọ bụghị naanị ịchọrọ iso, mana onye ịchọrọ ịchọ mmekọrịta miri emi!
Na-akwado: Twitter bụ ụzọ dị mma iji dọta ọtụtụ eyeballs na ozi ịre ahịa gị - mana imirikiti ndị mmadụ amaghị ihe ha na-eme wee mechie azịza ọ bụla. Ma ọ bụ na ha enweghị ndị na-eso ụzọ zuru oke, ma ọ bụ ha zipụ ozi na-ezighi ezi n'oge na-ezighi ezi ma ọ bụ mee otu ma ọ bụ karịa ọtụtụ nke mmejọ na-egbu egbu. Pịa ebe a ịmụta otu esi eme ka Twitter na-esote ka ọ dị mfe ma dịkwa mma.